Red dot Mobile Money Service - Red dot Network
ငွေပေးချေမှုအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူသော ဘဝဆီသို့
မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာ မိမိမိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် နေရာမရွေး အချိန်မရွေး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ငွေပေးပို့၊ ငွေလက်ခံနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်မိုဘိုင်းစနစ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည် ။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် ဘေးကင်းလုံခြုံ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရရုံသာမက
တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ငွေပေးပို့၊ ငွေလက်ခံခြင်းများကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ လျင်လျင်မြန်မြန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
အနာဂတ်တွင် သုံးစွဲရန်အတွက် ငွေစုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း
Red dot ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
ငွေသား လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ရမှုကြောင့် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခက်အခဲများအား လျော့နည်းစေခြင်း
Red dot Network နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောာင်မှုသုံးစွဲသူများသည် မိမိအကောင့်မှ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများကို Red dot ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်အမြောက်အများတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမှီ နောက်ထပ် မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများစွာအား ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သည် Red dot Mobile Money ကို အထောက်အပံ့ ပေးသော Partner ဖြစ်ပါတယ်။
Mobile Money အလုပ်လုပ်ပုံ
Red dot နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသော မိုဘိုင်းငွေ ကြေး ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူသည် မိမိ ၏ မိုဘိုင်း ပိုက်ဆံ အကောင့်ကို ငွေသွင်းရန် နီးစပ် ရာ မိုဘိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Red dot - MMS ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ထံ သို့ သွား လိုက်ပါ။ ဆိုင်ရှင်အား ငွေသွင်းမည့်ပမာဏ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ပြောပြ လိုက်ရုံပါပဲ။
ငွေဖြည့်သွင်းရန်အတွက် Red dot ကိုယ်စား လှယ်မှ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း အောင်မြင်သည်နှင့် တပြိုင် နက် ငွေသွင်းသူသည် မိမိမိုဘိုင်း အကောင့် မှ ပေးပို့သောစာတိုနှင့်တကွ Red dot ကိုယ်စား လှယ်ထံမှ ငွေသွင်းဖြတ်ပိုင်း လက်ခံရယူလိုက် ပါ။
မိမိ၏ မိုဘိုင်းပိုက်ဆံ အကောင့်မှ ငွေထုတ်ယူ ရန် နီးစပ်ရာ မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေး သည့် Red dot-MMS ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ထံ သို့သွားပြီး Agent Code (သို့)ကိုယ်စားလှယ် နံပါတ်ရိုက်နှိပ်ကာ ငွေထုတ်ယူရန် လုပ်ဆောင် ပါ။
ငွေထုတ်ယူမည့်သူထံမှ Tnx ID (Transition ID) နှင့်တကွ OTP (မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအကောင့် မှ ပေးပို့သော) ကုဒ်ရရှိသည် နှင့်တပြိုင်နက် Red dot ကိုယ်စားလှယ်မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ လိမ့်မည်။
ငွေထုတ်ယူခြင်းအောင်မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ငွေထုတ်ယူသူသည် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအကောင့်မှ ပေးပို့သောစာတိုနှင့်တကွ Red dot ကိုယ်စား လှယ်ထံမှ ငွေထုတ်ဖြတ်ပိုင်း လက်ခံရယူလိုက် ပါ။
ငွေပို့ရန် နီးစပ်ရာ မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် Red dot-MMS ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင် ထံသို့ သွားလိုက်ပါ။ ဆိုင်ရှင်အား ပို့ငွေပမာဏ၊ မိမိဖုန်းနံပါတ်၊ NRC နံပါတ် နှင့် တစ်ဖက်မှ ငွေ လက်ခံမည့်သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် တို့ကိုပြောပြလိုက် ရုံပါပဲ။
ငွေပို့ရန် Red dot ကိုယ်စားလှယ်မှ ပို့ငွေ ပမာဏနှင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ရယူပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမယ်။
ငွေပို့ခြင်း အောင်မြင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ငွေ ပို့သူသည် မိမိဖုန်းထဲသို့ ဘောက်ချာနံပါတ်၊ OTP (password) နှင့် ပို့ငွေပမာဏ များပါ သော စာတို SMS နှင့်တကွ Red dot ကိုယ် စားလှယ်ထံမှ ငွေပို့ဖြတ်ပိုင်းကိုပါ လက်ခံရယူ လိုက်ပါ။
ငွေလက်ခံမည့်သူသည် Red dot နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားသော မိုဘိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု အသုံး ပြုသူ ဖြစ်ပါက မိမိ အကောင့်ထဲသို့ ငွေဝင်လာ မည်ဖြစ်ပြီး၊ Red dot နဲ့ချိတ်ဆက်ထားသော မို ဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူမဟုတ် ပါက မိမိလက်ခံရရှိသော စာတို SMS နှင့်တကွ နီးစပ်ရာ မိုဘိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် Red dot - MMS ကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်ထံသို့ သွားလိုက်ပါ။
ပို့ငွေလက်ခံရန် မိမိဖုန်းတွင် လက်ခံရရှိသော စာတို SMS တွင် ပါသော ဘောက်ချာနံပါတ် ၊ ငွေပို့သူ ထံမှ ဆက်သွယ်ရရှိသော OTP (password) နှင့် မိမိဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပြောပြ လိုက်ပါ။ ပို့ငွေထုတ်ပေးရန် Red dot ကိုယ်စား လှယ်မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမယ်။
ပို့ငွေ ထုတ်ယူခြင်း ပြီးမြောက်ပါက ငွေလက်ခံ မည့်သူသည် ငွေထုတ်ယူခြင်းအောင်မြင်ကြောင်း စာတို SMS ဖုန်းထဲတွင် လက်ခံရရှိ မှာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်ရှင်ထံမှာ ပို့ငွေပမာဏ နှင့်ငွေ လက်ခံဖြတ် ပိုင်းကိုပါလက်ခံရယူလိုက်ပါ။
What do other people think of Red dot Mobile Money?
Ma Khin Ma Ma Lae
Red dot-MMS ဆိုင်မှာ ငွေသွားထုတ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ အမတို့အိမ်နားမှာလည်း ဆိုင်ရှိနေတော့ ခပ်မြန်မြန်လေး ပြေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Ko Soe Lay
"ကြိုက်တယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ M-Pitesan က Ooredoo ရဲ. Mobile Money အသစ်ဆိုတော့ Red dot စက်ကနေတစ်ဆင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရတော့ သဘောကျတာပေ့ါ။"
Ma Kay Khine
ညီမက Ooredoo user ပဲလေ။ M-ပိုက်ဆံလည်းစမ်းသုံးကြည့်နေတော့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရှိတဲ့ Red dot ဆိုင်မှာ အကောင့်ထဲငွေသွားသွားသွင်းဖြစ်တယ်။
အနီးဆုံးမှာ ရှိတဲ့ Red dot ဆိုင် ကို ရှာဖွေရန်
ယခု Red dot ဆိုင် (၂၁,၀၀၀) ကျော်ရှိနေပါပြီ။ မကြာမီမှာလည်း Red dot ဆိုင်တွေ ပိုများလာမှာပါ။ ဒီဆိုင်တွေမှာ သင့်ရဲ့ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေ ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Red dot MMS ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်လိုပါသလား။ Customer Care Team ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ (ဖုန်း +95 1 370050, Viber +95 97963 47015)။
This video can't be played with your current browser.